Balaawwanii fi mudannoowwan imala qilleensaa - BBC News Afaan Oromoo
Godina Jimmaa Aanaa Oomoo Beeyyamitti xiyyaarri Abisiniyaa caccabe lubbuun darbe
Godina Jimmaa Aanaa Oomoo Beeyyamitti xiyyaarri qabeenyi isaa kan dhaabbata Abisiniyaa ta'eefi shaakkalaaf tajaajilu kufee caccabe.
Paayileetii Miyaanmaar xiyyaara gommaa fuulduraa malee qubachiise
Paayilatiin Miyaanmaar meeshaan saffisa xayyaaraa to'achuun gommaatiin lafa qabachiisu rakkoo godhannaan xiyyaaricha gommaa malee dhaabuu danda'eera.
Niijeeritti dho'iinsi boba'aa namoota hedduu ajjeese
Niijeeritti konkolaataan boba'aa fe'u dho'uun namoota hedduu ajjeese
Ibidda xayyaaraa Moskoo: Moskootti balaa xayyaaraan namoonni 41 du'an
Xayyaarri Raashiyaa, Moskoo buufata xayyaaraa Shereemetiyevoon qubannaa yeroo balaa erga taasiseen booda ibiddi qabachuun namoota 41 ajjeese
Balalistoonni ''irra-deddeebbiin'' qajeelfama dhabbata Booyingin kenname hojiirra oolchuu isaanii gabaasni yeroo duraaf bahe kuni eera.
Saanduqni odeeffanoo balallii xiyyaaraa galmeessu 'Black box' maalidha?
Xiyyaarri yoo kufu odeeffannoo irraa argachuuf kan barbaadamu 'black box' maal akka ta'e viidiyoo kanarraa hubadhaa.
Maatiin lammilee Keeniyaa balaa xiyyaara Itoophiyaa ji'a darbeetiin lubbusaanii dhaban Daandii Xiyyaarichaa fi Beoing himachuufi jedhan.
Waa'ee balaa xiyyaara Itoophiyaa ET302 odeeffannoon dabalataa bahaa kan jiran yommuu ta'u, sababiin balaa kanaa sirna to'annoo xiyyaarichaa waliin kan walqabatu ta'uu akka danda'amu ibsamaa jira.
Oduun kun morkataa Airbus kan ta'e Boeing wayita sababa balaa xiyyaarota isaa lama irra gaheen fudhatamummaan isaa gaaffii keessa jirutti.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa har'as gadda balaa boyiingi 737 maaksi 8 qaqabee keessatti argamulleen,cimina ittiin beekamuun akka dhaabate Hojii aggeessaan dhaabbatichaa Tewelde Gabramaariyaam dubbatu.
Lafti tibbana xiyyaarri daandii qilleensa Itoophiyaa itti kufee caccabee Tullu Farraa jedhama. Maanguddoonni maqichiiattamiin akka moggaafame BBC'tti himaniiru.